Baarlamaanka Talyaaniga - BBC Somali
12 Nofembar 2011
Image caption Baarlamaanka Talyaaniga
Baarlamaanka Talyaaniga waxa u socda fadhi ku saabsan barnaamijka dib-u-habaynta dhaqaalaha, kaasi oo horseedi kara in uu iscassilo raiisal-wasaaraha haatan Sylvio Berlesconi.
Barnaamijkani dib-u-habaynta iyo yamxeerinta dhaqaalaha waxa hore u ogolaaday aqalka senate ee baarlamaanka Talyaaniga, maantana waa u fadhiya aqalka hoose si ay u ansixyaan barnaamijkani. Hore ayuu ugu ballanqaaday Sylvio Berlesconi in uu iscassili doono marka la ansixiyo barnaamijkan cusub.
Waxa si weyn loo hadal hayaa in jagadani loo magacaabi doono Mario Monti oo u muuqda ninka ugu cadcad, in kasta oo ay aad uga soo horjeedaan axsaaba isbahaysiga ee uu hoggaaminayey Sylvio Berlesconi. Mario Monti waxa uu hore uga mid ahaan jirey guddoomiyayaasha guddiyada ururka Midowga Yurub.
Talyaanigu waxa uu la daalaadhacayaa in uu dib u soo ceshado kalsoonidii ahayd in uu iska bixi karo deymanka ballaadhan ee lagu leeyahay.